इजाजतपत्र सम्झौता | Law & More B.V. | नेदरल्यान्ड्स
ब्लग » इजाजतपत्र सम्झौता
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार तेस्रो पक्षहरू द्वारा अनधिकृत प्रयोगबाट तपाइँको सिर्जनाहरू र विचारहरूको रक्षा गर्न अवस्थित छ। जहाँसम्म, केहि केसहरूमा, उदाहरणका लागि यदि तपाईं आफ्नो सिर्जनाहरू व्यावसायिक रूपमा शोषण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं अरूले यसलाई प्रयोग गर्नको लागि सक्षम बनाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाइँ आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ती को बारे मा अरूलाई कती अधिकार दिन चाहानुहुन्छ? उदाहरण को लागी, तेस्रो पार्टी लाई अनुवाद गर्न, छोटो बनाउने वा तपाइँले प्रतिलिपि अधिकार राख्नु भएको पाठलाई अनुकूलन गर्न अनुमति छ? वा तपाइँको पेटन्ट गरिएको आविष्कार सुधार गर्ने? इजाजत पत्र सम्झौता एक अर्काको अधिकार र बौद्धिक सम्पत्ती को उपयोग र शोषणको सम्बन्धमा दायित्वहरू स्थापना गर्न उचित कानुनी माध्यम हो। यस लेखले स्पष्ट रूपमा के बुझाउँछ कि इजाजत पत्र सम्झौतामा के समावेश छ, त्यहाँ के प्रकारहरू छन्, र कुन पक्षहरू सामान्यतया यो सम्झौताको एक हिस्सा हुन्।
बौद्धिक सम्पत्ति र इजाजतपत्र
मानसिक श्रम को नतिजा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनिन्छ। अधिकारका विभिन्न प्रकारहरू प्रकृति, ह्यान्डलिंग र अवधिमा फरक छन्। उदाहरणका प्रतिलिपि अधिकारहरू, ट्रेडमार्क अधिकारहरू, प्याटेन्टहरू र ट्रेड नामहरू हुन्। यी अधिकारहरू तथाकथित अनन्य अधिकारहरू हुन्, जसको अर्थ त्यो हो कि तेस्रो पक्षहरू मात्र उनीहरूले अधिकार बोक्ने व्यक्तिको अनुमतिमा प्रयोग गर्न सक्दछन्। यसले तपाईंलाई विस्तृत विचारहरू र रचनात्मक अवधारणाहरू सुरक्षित गर्न अनुमति दिँदछ। तेस्रो पक्षलाई प्रयोगको लागि अनुमति दिने एउटा तरिका इजाजत पत्र जारी गरेर हो। यो कुनै पनि रूपमा दिइन्छ, मौखिक वा लिखित रूपमा। यसलाई लाइसेन्स सम्झौतामा लिखित रूपमा राख्नु राम्रो हुन्छ। एक विशेष प्रतिलिपि अधिकार इजाजतपत्र को मामला मा, यो कानून द्वारा पनि आवश्यक छ। इजाजतपत्रको सामग्रीका बारे विवाद र अस्पष्टताको स्थितिमा लिखित इजाजतपत्र पनि दर्ता र योग्य हुन्छ।
इजाजतपत्र सम्झौताको सामग्री
इजाजत पत्र सम्झौता लाइसेन्सदाता (बौद्धिक सम्पत्ती अधिकारको धारक) र इजाजतपत्र दिने (लाइसेन्स प्राप्त गर्नेको बीच) अन्त हुन्छ। सम्झौताको मूल भनेको लाइसेन्सदाताले सम्झौताको बमोजिम शर्तहरू भित्र लाइसेन्सरको विशेष अधिकार प्रयोग गर्न सक्दछ। जबसम्म लाइसेन्सदाता यी सर्तहरूको पालना गर्दछ, लाइसेन्सदाताले उसको बिरूद्ध उसको अधिकार प्रयोग गर्दैन। सामग्रीको सर्तमा, त्यसकारण इजाजतपत्रकर्ताको सीमितताको आधारमा इजाजतपत्रको प्रयोग सीमित गर्नको लागि त्यहाँ धेरै नियमन गर्न बाँकी छ। यो खण्डले इजाजतपत्र सम्झौतामा राख्नु पर्ने केही पक्षहरू वर्णन गर्दछ।
दल, क्षेत्र र अवधि
सर्वप्रथम, यो पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण छ दलहरू इजाजतपत्र सम्झौतामा। यो एक समूह कम्पनी चिन्तित यदि इजाजत पत्र को उपयोग गर्न को हकदार छ सावधानीपूर्वक विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ। थप रूपमा, पार्टीहरू तिनीहरूको पूर्ण वैधानिक नामहरू द्वारा सन्दर्भित गर्नुपर्दछ। थप रूपमा, क्षेत्र विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुपर्दछ। सर्वप्रथम, यसलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ लाइसेन्स सम्बन्धित जुन आपत्ति। उदाहरण को लागी के यो व्यापार नाम वा सफ्टवेयरको मात्र चिन्ता गर्दछ? सम्झौताको सही बौद्धिक सम्पत्तीको वर्णन त्यसैले सुझाव दिइन्छ, साथ साथै, उदाहरण को लागी, एप्लिकेसन र / वा प्रकाशन नम्बर यदि यो प्याटेन्ट वा ट्रेडमार्क सम्बन्धित छ भने। दोस्रो, यो महत्त्वपूर्ण छ कसरी यो वस्तु प्रयोग गर्न सकिन्छ। के लाइसेन्सदाताले उप-इजाजतपत्र छोड्न वा बौद्धिक सम्पत्तीको शोषण गर्न सक्छन् यसलाई उत्पादन वा सेवाहरूमा प्रयोग गरेर? तेस्रो, यो क्षेत्र (उदाहरणका लागि नेदरल्याण्ड, बेनेलक्स, युरोप, इत्यादि) जसमा इजाजतपत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ पनि निर्दिष्ट गरिएको हुनुपर्दछ। अन्तमा, अवधिको अवधि सहमत हुन, जुन निश्चित वा अनिश्चित हुन सक्छ। यदि सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तीसँग समय सीमा छ भने, यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ।
सम्झौतामा यो पनि भन्नु पर्छ कि यो कस्तो प्रकारको इजाजतपत्र हो। त्यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन्, जस मध्ये यी सब भन्दा साधारण हुन्।
विशेष: इजाजतपत्र प्राप्तकर्ताले बौद्धिक सम्पत्ती अधिकारको प्रयोग वा शोषणको अधिकार प्राप्त गर्दछ।
गैर-विशेष: लाइसेन्सकर्ताले लाइसेन्सकर्ताको अतिरिक्त अन्य पक्षहरूलाई पनि इजाजत दिन सक्दछ र बौद्धिक सम्पत्ति आफैंमा प्रयोग र शोषण गर्न सक्दछ।
एकमात्र: अर्ध-अनन्य प्रकारको इजाजतपत्रमा जसमा एक इजाजतपत्र प्राप्तकर्ताले लाइसेन्सरको साथ बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग र शोषण गर्न सक्दछ।
खोल्नुहोस्: शर्तहरू पूरा गर्ने कुनै पनि इच्छुक पार्टीले इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेछ।
प्राय: अधिक शुल्क एक विशेष इजाजतपत्रको लागि प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर यो विशेष परिस्थितिहरूमा निर्भर गर्दछ कि यो राम्रो विकल्प हो। एक गैर-विशेष लाइसेन्स ले अधिक लचिलोपन प्रदान गर्न सक्दछ। थप रूपमा, एक विशेष इजाजतपत्रको कम उपयोग हुन सक्छ यदि तपाईं एक विशेष इजाजतपत्र प्रदान गर्नुहुन्छ किनकि तपाईंले अर्को पक्षलाई आफ्नो विचार वा अवधारणाको व्यावसायीकरण गर्न अपेक्षा गर्नुहुन्छ, तर लाइसेन्सदाताले यससँग केहि गर्दैन। तसर्थ, तपाइँ लाई न्यूनतम को रूप मा तपाइँको बौद्धिक सम्पत्ती अधिकार के गर्न पर्छ के रूप मा लाईसेन्स मा केहि दायित्वहरु थोप्न सक्नुहुन्छ। इजाजतपत्रको प्रकारमा निर्भर रहँदै यो इजाजत पत्र प्रदान गरिएको सर्तहरू ठीकसँग राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
अन्तमा, त्यहाँ अन्य पक्षहरू हुन सक्छन् जुन सामान्य रूपमा इजाजतपत्र सम्झौतामा व्यवहार गरिन्छ:
यो शुल्क र यसको राशि। यदि शुल्क लिइयो भने, यो एक निश्चित आवधिक राशि (इजाजतपत्र शुल्क), रोयल्टी (उदाहरणका लागि, कारोबारको प्रतिशत) वा एक अफ-रकम (मोटामोटी)। अवधि र गैर भुक्तान वा ढिला भुक्तानी को लागि व्यवस्था सहमत हुनुपर्दछ।
लागू कानून, सक्षम अदालत or मध्यस्थता / मध्यस्थता
गोप्य जानकारी र गोप्यता
उल्ल of्घनको बन्दोबस्त। लाइसेन्सदाता आफैले कानुनी रूपमा कानुनी रूपमा अधिकार प्राप्त नगरी कार्यवाही शुरू गर्न अधिकार पाएको छैन, यदि आवश्यक भएमा यो सम्झौतामा नियमन गरिनु पर्छ।
इजाजत पत्रको स्थानान्तरण: यदि ट्रान्सफरेबिलिटी इजाजतपत्रकर्ताले चाहेको छैन भने, यसलाई यसमा सहमति हुनुपर्दछ अनुबंध.
ज्ञानको स्थानान्तरण: इजाजत पत्र सम्झौता पनि कसरी जान्न सकिन्छ भनेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। यो गोप्य ज्ञान हो, प्राय: प्राविधिक प्रकृतिको, जुन पेटन्ट अधिकारले कभर गर्दैन।
नयाँ घटनाक्रम। बौद्धिक सम्पत्तीको नयाँ विकासहरू पनि इजाजतपत्रको इजाजतपत्रले छोपिदिन्छ कि हुँदैन भनेर पनि सम्झौता गरिनु पर्छ। यो यस्तो अवस्थामा पनि हुन सक्छ कि लाइसेन्सकर्ताले उत्पादनलाई अगाडि बढाउँछन् र लाइसेन्सदाताले यसबाट लाभ लिन चाहन्छन्। त्यो अवस्थामा, बौद्धिक सम्पत्तीमा नयाँ विकासको इजाजतपत्रको लागि एक गैर-विशेष इजाजतपत्र निर्धारित गर्न सकिन्छ।
सारांशमा, इजाजतपत्र सम्झौता एक सम्झौता हो जसमा एक इजाजतपत्रदाता लाई इजाजतपत्रकर्ताले प्रयोग गर्न र / वा बौद्धिक सम्पत्तीको शोषण गर्न अधिकार प्रदान गर्दछ। यो उपयुक्त छ यदि लाइसेन्सदाता आफ्नो अवधारणाको व्यवसायिकरण गर्न चाहन्छ वा अर्को द्वारा काम गर्दछ। एउटा इजाजत पत्र सम्झौता अर्को जस्तो छैन। यो किनभने यो विस्तृत सम्झौता हो जुन स्कोप र सर्तहरूको सर्तमा फरक पर्न सक्छ। उदाहरण को लागी, यो बिभिन्न बौद्धिक सम्पत्ती अधिकारहरु लाई लागू हुन सक्छ र कसरी उनीहरुलाई प्रयोग गरिन्छ, र पारिश्रमिक र छुटको मामलामा पनि भिन्नताहरु छन्। आशा छ, यो लेखले तपाईंलाई इजाजतपत्र सम्झौता, यसको उद्देश्य र यसको सामग्रीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको बारेमा राम्रो विचार दिएको छ।
के तपाईंसँग अझै यो लेख पढे पछि यो सम्झौताका बारे प्रश्नहरू छन्? त्यसोभए सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More। हाम्रो वकिलहरू बौद्धिक सम्पत्ति कानूनमा विशेष गरी विशेषज्ञता प्राप्त गर्दछन्, विशेष गरी प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क कानून, ट्रेड नाम र पेटेन्टको क्षेत्रमा। हामी तपाईंको सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन तयार छौं र उपयुक्त इजाजतपत्र सम्झौता बनाउन मद्दत गर्न पनि खुशी छौं।
अघिल्लो पोस्ट स of्कटको समयमा पर्यवेक्षक बोर्डको भूमिका
अर्को पोस्ट उपक्रमको स्थानान्तरण